ဖူးနုသစ်: Economist ရဲ့ အယ်လ်ဘမ် (၃)
Economist ရဲ့ အယ်လ်ဘမ် (၃)
Economist ရဲ့ ဓာတ်ပုံစာအုပ် တတိယပိုင်းပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ စဉ်းစားစရာတွေ ပိုပြီး ပါသလိုပဲ။ သူရေးထားတာကို ဘာသာပြန်ရတာ အတော် ခက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ထားတာ မဖတ်ဘဲ အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာပြန်တာ မှားသွားရင်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အားနည်းချက်ပါ။ မြန်မာရေးတာကို မြန်မာက ဘာသာပြန်ရတာတောင် အတော် မလွယ်ဘူး။ :P
An increase in traffic population without commensurate increase in paved road has created traffic congestion. The total length of paved road almost remains the same as they were in the past (according to the World Bank’s World Development Indicator Statistics). This imbalance seems to have contributed significantly to environmental degradation and worsening air quality in the city of Yangon, which shows up in the warming temperature: 29 Degree Celsius (low) to 34 Degree Celsius (high),adistinct anomaly inawinter month of December. Long term solutions to this woe might include introducing mass transit, expanding road capacity, and devisingacredible incentive mechanism through prudent urban planning and policy interventions.
လမ်းတွေကို မတိုးချဲ့ဘဲ ယာဉ်စီးရေတွေ များပြားလာတာကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြစ်လာစေ ပါတယ်။ ခင်းထားတဲ့ လမ်းတွေရဲ့ စုစုပေါင်း အရှည်က ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့တိုးတက်မှု ကိန်းညွှန်းပြ စာရင်းဇယား အရဆိုရင် အရင်အတိုင်း ပါပဲ။ အဲဒီလို မညီမျှမှုက ရန်ကုန် မြို့တော်ရဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေပြီး လေထု ညစ်ညမ်းမှုကို တိုးလာစေ ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာလမှာ ထူးထူးခြားခြား နဲ့ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာတဲ့ အပူချိန် ၂၉ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ် (အနိမ့်ဆုံး) နဲ့ ၃၄ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ် (အမြင့်ဆုံး) က ဒီအချက်ကို ပြနေပါတယ်။ ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ ရေရှည်စီမံကိန်း အနေနဲ့ လူအများကြီး သုံးလို့ ရတဲ့ ရထားတွေ စီစဉ်ပေးဖို့၊ လမ်းတွေ တိုးချဲ့ဖို့ ၊ မြို့တော်ကို စနစ်တကျ စီစဉ်ခန့်ခွဲခြင်းနဲ့ စည်းမျည်းစည်းကမ်း တွေ ချမှတ်ခြင်းကနေပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ တွန်းအားပေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Unlike many countries, informal educational services and training centers playavital role in the education system in Myanmar. They have been sprouting up in large quantities across the country to fill in the gap in the education market not being served by more conventional and formal educational institutions, and provide more rigorous learning opportunities. Consequently, the entire landscape of the city of Yangon is riddled with commercial signboards (as shown in picture) vying for student enrollment. It could be argued tenuously (as no empirical study has been done before) that the two sectors of education are complementary to each other. Hence, it is reasonable to expect that college graduates receiving education from both channels can expect to earn premium wages as compared to those not receiving extra training in the informal sector. At the extreme,afew private institutions that are perfect substitutions to the public ones have already begun operational and their numbers have been growing. Available anecdotal evidence suggest that this upward trend will continue in the following years,asanguine new for those seeking employment in the private education sector.
တခြားနိင်ငံတွေနဲ့ မတူတာကတော့ သမာရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေ နဲ့ သင်တန်းတွေက မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာ အဓိက အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေတာပါပဲ။ သူတို့ဟာ ပုံမှန် တက္ကသိုလ် ကောလိပ် တွေကနေ သင်မပေးနိုင်တဲ့ ကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ပဲပင်ပေါက်လို ပွထနေအောင် ပေါ်လာပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် သူတို့ဆီမှာက ပိုပြီး ပြည့်စုံအောင် သင်ကြားနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ အကျိုးဆက် အနေနဲ့ကတော့ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးရဲ့ မြင်ကွင်းမှာ ပုံထဲမှာ ပြထားသလိုမျိုး ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး ကျောင်းသားတွေကို သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် ခေါ်နေကြပါတာပါပဲ။ အကြောင်းပြချက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံ မရှိပဲ ငြင်းခုံနေကြတာ ( စနစ်တကျ ဘယ်သူမှ စစ်တမ်းကောက် မလေ့လာဖူးပါဘူး။) ကတော့ ဒီပညာရေး စနစ်နှစ်ခုဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အပြန်အလှန် သဟဇာတ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် မို့ ကျောင်းလည်းတက် သင်တန်းလည်းတက်တဲ့ ကောလိပ် ကျောင်းဆင်း တစ်ယောက်က သင်တန်းတွေ တက်မထားတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းဆင်း တစ်ယောက်နဲ့ ယှဉ်ရင် လခပိုများနိုင်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်ထိ ကြည့်မယ် ဆိုရင် တက္ကသိုလ် ကောလိပ်တွေက ပေးတဲ့ပညာရေးကို အစားထိုးပေးနိုင်တဲ့ ကျောင်းတစ်ချို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီလို ကျောင်းမျိုးတွေရဲ့ အရေအတွက်ဟာ ပိုပြီးတော့လည်း တိုးပွား လာနေပါပြီ။ ကြားရတဲ့ စကားတွေပေါ် အခြေခံပြီး ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီလမ်းကြောင်းဟာ နောက်နှစ်အနည်းငယ် အထိ ရှိနေဦးမှာပါ။ အကောင်းမြင်ဘက်က လှည့်တွေးရင်တော့ ပုဂ္ဂလိက ပညာရေး နယ်ပယ်မှာ အလုပ်ရှာတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ သတင်းကောင်းပေါ့။
A reminiscence of British Colonization.
ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့ အမှတ်ရစရာ တစ်ခုပါ။
A local produce market on the side ofacommuter train station.
မြို့ပတ်ရထားလမ်းဘေးက ဒေသထွက် ပစ္စည်းတွေ ရောင်းနေတဲ့ ဈေးပါ။
The Rangoon University, which used to beacrown jewel of the Burmese education decades ago, boasted producing many great intellects during its glorious days. Many believe that had this great tradition been preserved or improved gradually, the Rangoon University could have been onapar with some of the best Universities in the world. In response toarecent budget cut proposal, the president of the University of California – Berkeley said “It takes many years to buildagood university; it takes onlyafew years to make itamediocre one.” Far from becomingareputable university, the Rangoon University has become synonymous with decrepit dorms and buildings (shown in picture) surrounded by bushy and thick plants and weeds, andadeserted campus devoid of lively campus activities.
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်လောက်က မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေးမှာ သရဖူဆောင်းခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါ။ သူရဲ့ တောက်ပတဲ့ နေ့ရက်တွေ တုန်းကတော့ ကြီးကျယ်တဲ့ ပညာရှင်တွေ ကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ မွေးထုတ်ပေးခဲ့တာပေါ့။ အများစုက ယုံကြည်နေကြတာတော့ အရင်တုန်းက ဒီလို ကြီးကျယ်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းပြီး တဖြည်းဖြည်း မြှင့်တင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် အခုအချိန် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်တွေ ထဲမှာ တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်နေမှာပါ ဆိုတာပါပဲ။ အခုလတ်တလော ဘဏ္ဍာရေး အသုံးစရိတ်တွေ လျော့ချဖို့ အဆိုပြုချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ် ဘာကလေ ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက "ကြီးကျယ်တဲ့ တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကနေ သာမန် အခြေအနေကို ကျဆင်းသွားဖို့ အတွက်တော့ နှစ်အနည်းငယ်ပဲ လိုတယ်။" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ တက္ကသိုလ် ဖြစ်လာဖို့ ဝေးလို့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကတော့ ပုံမှာတွေ့ရသလိုပဲ အိုမင်းနေတဲ့ ကျောင်းဆောင်တွေ အဆောက်အဦးတွေနဲ့ အတူ ခြုံပုတ်တွေ ပေါင်းမြက်တွေနဲ့ ဝန်းရံလို့ နေပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ မရှိတော့တဲ့ ကျောင်းဝန်းထဲမှာ အသက်ဝင်နေတဲ့ တက္ကသိုလ် တစ်ခုရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ကင်းမဲ့လို့ပေါ့။
The run-down situation of the Rangoon University campus is starkly juxtaposed with the elegance of the historical Judson Church, which is sitting next to the campus and well preserved.
ယိုယွင်းနေတဲ့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်နဲ့ ထင်ထင်ရှားရှား ကွာခြားနေတာကတော့ ကျက်သရေရှိစွာ ရပ်တည်နေတဲ့ သမိုင်းဝင် ယုဒသန် ဘုရားကျောင်း ပါပဲ။ ဒီအဆောက်အဦးက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့ ဘေးချင်းကပ်လျှက်မှာ ရှိနေပြီးတော့ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
Symbols of human resiliency and sordid images of extreme poverty:
These people eke outaliving by setting up stalls justafew inches away fromatransit rail track in the city of Yangon and selling food to transit passengers. Only by providing gainful employment elsewhere and perhaps additional public services such as basic health care and job training programs will the dire consequences of abject poverty be alleviated.
ဘယ်လောက်ဆိုးရွားနေပေစေ ရပ်တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လူသားတို့ ရှင်သန်မှုရဲ့ ပြယုဂ်နဲ့ အလွန်အမင်း ဆင်းရဲကျပ်တည်းခြင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျစရာ ပုံရိပ်ပါ။ သူတို့ဟာ ဝမ်းဝဖို့အတွက် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ရထားလမ်းကနေ လက်မအနည်းငယ်လောက် အကွာအဝေးမှာ ဆိုင်ခန်းလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ ရထားစီးခရီးသည်တွေကို အစားအသောက်တွေ ရောင်းနေကြတယ်။ သူတို့ကို လောက်လောက်ငင ဝင်ငွေရစေမယ့် အလုပ်အကိုင်တစ်ခု တခြားနေရာမှာ ဖန်တီးပေးနိုင်မှသာ ဒါမှမဟုတ် အခြေခံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အတွက် ထရိန်နင် ပရိုဂရမ် တွေလိုမျိုး ပြည်သူနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အကျိုးဆောင်မှုတွေ လုပ်ပေးနိုင်မှသာ သူတို့ကို သနားစရာကောင်းတဲ့ ဆင်းရဲတွင်းရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ကနေ လွတ်ကင်းစေမှာပါ။
Mini store onacommuter train: one can buy foods, herbal medicines, stationery, flowers, and household appliances onacommuter train.
မြို့ပတ်ရထားပေါ်က မီနီစတိုးကလေး တစ်ခုပေါ့။ ရထားပေါ်မှာ ခရီးသည်တွေ အနေနဲ့ စားစရာ၊ တိုင်းရင်းဆေး၊ စာရေးကိရိယာ၊ ပန်း နဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
This vendor is selling cigarettes and snacks onacommuter train.
မြို့ပတ် ရထားပေါ်မှာ စီးကရက်နဲ့ မုန့်တွေ ရောင်းနေတဲ့ ဈေးသည် တစ်ယောက်ပါ။
A horticulturist is selling potted flowers to rail passengers.
ဥယျာဉ်စိုက်သူတစ်ယောက် ရထားပေါ်မှာ ပန်းအိုးနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ပန်းတွေ ရောင်းနေတာပါ။
A group of sellers is exchanging and sharing market information about local produce market while travelling onacommuter train. They make upalarge number of merchants supplying vegetables to the local markets located across the city of Yangon.
ရထားပေါ်မှာ ခရီးသွားရင်းနဲ့ ဈေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ ဖလှယ်နေကြတဲ့ ဈေးသည် တစ်စုပါ။ သူတို့ဟာ ရန်ကုန် တမြို့လုံးမှာ ရှိနေတဲ့ ဈေးတွေကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ပို့ဆောင်ပေးနေသူတွေရဲ့ အများစုပါပဲ။
Passengers and vendors are jockeying foraseat or perhapsastanding space on an approaching commuter train.
ဘူတာကို ဝင်လာတဲ့ ရထားပေါ်မှာ ထိုင်စရာ နေရာ ဒါမှမဟုတ် ရပ်စရာ တစ်နေရာ ရဖို့အတွက် အလုအယက် ပြေးလွှားနေကြတဲ့ ခရီးသည်တွေနဲ့ ဈေးသည်တွေပါ။
Labels: ဓာတ်ပုံ, ဘောဂဗေဒ, မြန်မာ, အတွေး
မမမွတ္ခ်က္ေပးတာ ထိခိုက္မွာစိုးလို႔ ဘာမွ ဝင္မေျပာပဲေနေနတာ..။(ဟီးအမွန္ကဘာမွ မေျပာတတ္လို႔)
ပါလာေတာ့ မမနဲ႔ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ ပစဝကို သတိရမိ
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အခုတင္ေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ၊စာေတြထက္ကို ဒီပံုေတြရိုက္ခဲ့တဲ့ ကိုဇက္တီသူငယ္ခ်င္း အီေကာ္ေနာ္မစ္ ဆိုသူကိုပဲ ပိုစိတ္၀င္စားမိတယ္။ သူ႕ အေၾကာင္း (ပညာေရး၊ဒီလို ဘြဲ႕ အတြက္ ဘယ္လိုေနာက္ခံကလာခဲ့တယ္၊ဘယ္လိုျပင္ဆင္ၾကိဳးစားခဲ့ရတယ္၊အခု ဘာေတြလုပ္ေနတယ္) ဆိုတာမ်ိဳးကို ေရးလို႕ရရင္ ကိုဇက္တီေရးပါလားဗ်။ ကိုဇက္တီ အရင္ေရးေနတဲ့ပုိ႕စ္ တခ်ိဳ႕ မွာလည္း ေတာ္ေတာ္ကို inspirational ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးေလးေတြဖတ္ရေလ့ရွိေတာ့ ဒီသူငယ္ခ်င္းအေၾကာင္းဆိုလည္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းမယ္လို႕ ထင္တယ္။ကိုယ္တိုင္က economics,business management စတာေတြကို စိတ္၀င္စားေတာ့ ျမန္မာေတြထဲက success story ဆိုတာမ်ိဳးေတြလည္းစိတ္၀င္စားတယ္။ ကိုဇက္တီကလည္း စာေရးေကာင္းတယ္ဗ်။ အဆင္ေျပရင္ေရးပါလို႕ တိုက္တြန္းပါတယ္။
သူ႕အေၾကာင္းကို ေရးေတာ့ ေရးခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ေလာေလာဆယ္ မေရးပါနဲ႕လို႕ တားထားလို႕ပါ။ :)
Economist ရဲ့ အယ်လ်ဘမ် (၂)
Economist ရဲ့ အယ်လ်ဘမ် (၁)